ကောင်းမွန်ဝင်း: ဘလော့ဂ်ဒေး ဆုတောင်း
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Friday, August 26, 2011
မြန်မာလူမျိုးတွေ မြန်မာဖောင့်ကို သုံးတာလည်း အတော်များနေပြီ အစ်မရေ... ၀မ်းသာစရာလဲ ကောင်းလှရဲ့..
အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မကို နားလည်တယ်... အားမှ လာဖတ်... အနော်တို့ကတော့ တက်ရင် ဖတ်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဗျ... ဟီးဟီး
အမှတ်တရ ရေးပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ... ကျွန်တော်လည်း ရေးဖို့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုရေးလဲ လိုက်စနည်းနာ နေတာ...
နားလည်ပါတယ်။ ဒီလောက် အလုပ်တွေ များနေတဲ့ ကြားထဲက ဘလော့ဘက် လှည့်ရတာဆိုတော့လေ။
အလုပ်က လုပ်နိုင်တုန်း လုပ်ထားရတာ မဟုတ်လား။ အားလပ်တဲ့အချိန်လေးမှ ဘလော့ဘက် လှည့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘလော့လောကကြီး တစ်ခုလုံးကိုတော့ မေ့မထားလိုက်ပါနဲ့။ ဘလော့တွေထဲမှာ အင်အားတွေ ရှိတယ်။ လေ့လာစရာတွေ ရှိတယ်။ နည်းပညာတွေ ရှိတယ်။ ရယ်မောပျော်ရွှင်စရာတွေ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် တံခါးပိတ်ပြီး အခန်းတွင်းချည်း အောင်းမနေပါနဲ့။ ဘလော့လောကလေးကိုလဲ တံခါးဖွင့်ပြီး တစ်ခါတစ်ခါ လှမ်းကြည့်ပါဦးလို့။
ပျော်ရွှင် ကျန်းမာ ချမ်းသာ လိုရာတွေ ပြည့်ပါစေ။
တဂ်ပို့စ်လေးတွေရဲ့ ဝိသေသ လက္ခဏာ တစ်ခုက အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးတွေကို နှိုးနိုင်ခြင်းပါပဲ၊း) ဒီလိုပြောရတာ အလုပ်များတဲ့ မ,ကောင်းမွန်တို့ကို မစာနာလို့ မဟုတ်ဘူးနော်၊ ပို့စ်အသစ်လေး တစ်ပုဒ် တွေ့ရလို့ ဝမ်းသာသွားတာ သက်သက်ပါဗျာ၊ ပို့စ်ထဲမှာ ရေးသွားတာ အားလုံးကိုလည်း သဘောတူပါတယ်၊ မိသားစုဘဝ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လ် ဘဝနဲ့ ကိုယ်ပိုင် အားလပ်ချိန်.. သုံးပွင့်ဆိုင် ကြားမှာ ဘလော့ဂ်ကို ပေးရတာ၊ ဘလော့ဂ်ကနေ ပြန်ရတာတွေနဲ့ ပျော်ဖို့ ကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ...။
မမွန်နဲ့ အတွေးချင်းတူတယ်းD
မမွန်ကသာ မရေးတတ်ဘူးပြောတာ မမွန်ရေးတာလေးတွေ တအားဖတ်ကောင်းတာကို။ သဘောလည်း ကောင်းတယ်။ အပြင်မှာ အသံလည်း ချိုတယ်။ တကယ်ချစ်..။
ကိုယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ ကိုယ်အမြဲပတ်ချာရမ်းနေတော့ ဘလော့ပိတ်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာ။
ဖွင့်ချင်ဖွင့် ဖတ်ချင်ဖတ် ပိတ်ချင်ပိတ်(ကွန်ပြူတာ) ရေးချင်ရေး ဘာဘဲလုပ်လုပ် ထောက်ခံပြီးသား။
လူဆုိုတာ စိတ်ချမ်းသာဘို့ အဓိကပါ။
တိုင်းတပါးမှာ နေရတဲ့ ညီမ ဘဝ ကို နားလည် ပါတယ် ညီမ ဘယ်လောက် ဘဲ အလုပ်ရှုတ်ရှုတ် အရေးကြီးတဲ့ အခါ ညီမ သွေးနီး တယ်လေ ညီမ က မြန်မာ မလေးဘဲ
ညီမ အဆင်ပြေတဲ့ အခါ ရေး အဆင်ပြေတဲ့ အခါ ဖတ်နိုင်အောင်သာ ကျိုးစားပါညီမရေ တချိန်မှာ တော့ အမ တို့အားလုံး အဆင်ပြေလာမှာပါ
တက်ဂ်ကို အခုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရေးပေးတာ ကျေးဇူး
အရမ်းတင်ပါတယ်၊ လောလောဆယ် အပြင်ရောက်
နေလို့ အိမ်ပြန်ရောက်မှ သေသေချာချာ ထပ်ဖတ်အုံးမယ် ကျေးဇူးဗျို့ ...
ဘလော့ရွာကလေးက ပျော်စရာပါ...ကိုယ်ပိုင်နားချိန်၊ အလုပ်ချိန်၊ မိသားစုဘ၀တွေကြားထဲမှာ ဘလော့ရေးနေကြတဲ့သူတွေဟာ အချိန်ကို ကျကျနန ဆစ်ပိုင်းခွဲဝေ အသုံးချဖို့ ကျင့်သားရကြသူတွေ ဖြစ်လာကြတာမို့ လက်တွေ့ဘ၀မှာလည်း ပညာရော၊ ရသပါမကျန်၊ ဗဟုသုတအထိ နှိုက်ယူအသုံးချလို့ ရတာမို့ ဘလော့လောကကို တတ်နိုင်သလောက်တော့ ဆက်လက် ဖက်တွယ်ထားဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ...နောက်ဆုံးဆုတောင်းကိုလည်း ၀ိုင်းပြီး အားဖြည့် ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်...
မဝေးတော့တဲ့ အနာဂါတ်မှာ မြန်မာစာရိုက်စနစ်ကို လူတိုင်းသုံးတတ်ပါစေ..
မကောင်းမွန်ဝင်းလဲ အခြားသော ဘလော်ဂါများနည်းတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
မြန်မာဘလော့လေးမှာ နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာ စာတွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေ
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရလေးကို ဖတ်သွားပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ ဘလော့လေးကိုဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ။
Go on little sis.I believe you can blog more years cos you blogged even time of earthquake and sunami.Waiting for to read when the new post up.
Gyidaw(not blogger just reader)...:D
ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရလေး ဖတ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘလော့ဂ်ဂါ အသစ်ကလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အစ်မ လင့်လေးယူသွားပါတယ်။
အမစာလေးတွေက ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ...အားရင် အားသလို ရေးပါဦးနော်...
Happy Belated Blog Day ပါ..။
မြသွေး ဆိုက်မှာ လင့်ခ် ချိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ရှင်..။
(စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ရေးတာပါရှင်)